दुब्लो, पातलो हुनुहुन्छ ? यी चीज खानुस् ५ दिनमा हुन्छ चमत्कार ! - Nepal Insider
Home/स्वास्थ्य/दुब्लो, पातलो हुनुहुन्छ ? यी चीज खानुस् ५ दिनमा हुन्छ चमत्कार !
2,359 Less thanaminute
दुब्लो पातालो भएकै कारण कतिपय मानिसहरु तौल बढाउने अर्थात् मोटाउने औषधी खान्छन् तर यस्ता औषधीहरुले स्वास्थ्यमा गम्भीर हाने पु¥याउने गर्छ । चिकित्सकहरु पनि यस्ता औषधिहरु सेवन नगर्न सुझाव दिन्छन् ।
हाम्रो शरीरको वजन बढाउन र पातलो वा दुब्लो शरीरलाई फुर्तिलो बनाउन कार्बोहाइड्रेट र प्रोटिनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। प्रोटिन र कार्बोहाइड्रेटले भरिपूर्ण केही चिजहरुको खानाले साता दिनमै तपाईको शरीरको वजन बढ्नेछ ।
त्यस्तै उसिनेको आलु खानुस् यसले पनि तपाईको तौल बढाउन मद्दत पु¥याउँछ । आलुमा भरपुर मात्रामा कार्बोहाइड्रेट हुन्छ जसले पातलो वा दुब्लो व्यक्तिलाई फुर्तिलो र स्फुर्त बनाई शरीरको तौल बढाउँछ। यो तरिका तौल बढाउनको शत प्रतिशत प्रभावकारी हुने आयुर्वे्दिक घरेलु उपाय हो।
डा. अनिल भन्छन् – मुटु रोग लागेको छ कि छैन यसरी आफै थाहा पाउन सकिन्छ
अनुहारको दाग हटाउने सजिलो घरेलु तरीकाहरू यस्ता छन
अति गर्मी छ, ध्यान दिनुस् पानीको मात्रा कम भएको थाहा पाउने लक्षणहरु यस्ता छन् ….